Waa maxay tartanka wareejinta? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 24/05/2021 21:56 | Tababar
Faa'iidooyinka laga helayo noqoshada shaqaale dawladeed ayaa ah in jagadan mihnadeed ay bixiso xasillooni dhaqaale. Kuwii horeyba uheystay mowqif go'an, waxay indha indheeyaan mustaqbalkooda iyagoo abuuraya xiriir udhaxeeya xaalada ay hada kujiraan iyo dhacdadaas dhici karta Si kastaba ha noqotee, in kasta oo amniga dhaqaale uu qeexayo xasilloonida xirfadeed ee nolosha qofka sarkaalka ah, tani macnaheedu maahan in isbeddeladu aysan ka jirin shaqada kuwa u shaqeeya Maamulka Dawlada. Way dhici kartaa in mar uun, uu xirfadlahaasi go'aansado inuu bilaabo marxalad cusub meel kale.
Isbadal macnihiisu yahay u guurista degmo kale iyo, sidaa darteed, ka tagida howlihii ay soo waday ilaa waqtigaas Tartanka wareejinta kaliya maahan nidaamka loo adeegsaday kiiskanTaabadalkeed, tan macnaheedu waxa weeye waxa looyaqaano halka ugu dambeysa ee shaqaale dowladeed. Waqtigaas, ayuu yiri xirfadle horeyba booskiisa ayuu u leeyahay.
1 Tartan is-maamul ama is-beddel gobol ah
2 Sidee miisaanka mudnaanta u dhexgalayaa tartanka wareejinta
3 Goorta la gudbinayo iscasilaad
Tartan is-maamul ama is-beddel gobol ah
Hagaag, tartanka wareejinta ayaa xiiso gaar ah u leh kuwa ku jira xaaladdan. Nidaamkan, xirfad yaqaanka ayaa rasmi ka dhigi kara isbadalkan asagoo codsanaya boosaska laga heli karo xarumaha kale. Tartankan wuxuu noqon karaa mid madax-bannaan ama gobol. Waxay kuxirantahay nooca tartanka, halka loo socdo waxaa loo qaabeeyey qaab kale ama mid kale.
Nidaamkan, dhinacyo kala duwan ayaa lagu xisaabtamayaa, sida, tusaale ahaan, cabirka mudnaanta. Si aad ugu gudbiso arjigaaga tartamada astaamahan, waxaa lagama maarmaan ah inaad fiiro gaar ah u leedahay daabacaadda wicitaanka soo socda. Sidan oo kale, waxaad codsi ka sameyn kartaa codsigaaga. Maskaxda ku hay in xirfadlayaal kale oo badan ay sidoo kale xiiseyn karaan gaaritaanka hadafkan.
Sidee miisaanka mudnaanta u dhexgalayaa tartanka wareejinta
Sidan oo kale, miisaanka mudnaanta ayaa ah mid ka mid ah hababka loo adeegsado in lagu maareeyo codsiyada. Si loo duubo macluumaadkan, xirfadlaha waa inuu ku soo bandhigaa dukumintiyada lagama maarmaanka ah ee arjiga. Wicitaanka la daabacay wuxuu si faahfaahsan uga kooban yahay xogta la xidhiidha hawshan. Sharax cidda tartanka loogu talagalay iyo, haddaba, xirfadleyda ka qayb geli kara. Iyo, sidoo kale, sida wax looga qabanayo qorshahan waqtigiisa.
Nidaamka noocan ahi waa mid soo noqnoqda, tusaale ahaan qaybta waxbaridda. Ka qaybqaatayaashu waa inay ku soo gudbiyaan codsigooda muddada kama dambaysta ah ee loogu talagalay ujeedkan. Hay'adda awoodda u leh ayaa mas'uul ka ah daabacaadda qaraarka iyadoo la siinayo abaalmarinta ugu dambeysa. Tartanka noocan ah waxaa laga baaraandegi karaa aagag kala duwan, marka lagu daro qaybta waxbarashada.
Goorta la gudbinayo iscasilaad
Waxaa jira duruufo kaladuwan oo xirfadlaha laga yaabo inuu bedelay ra'yigiisa ama ra'yigeeda ku aadan ujeedadan. Waxaa laga yaabaa in xaaladaadu is bedeshay oo aad doorbideyso inaad ka baxdo tartanka. Tani waxay muujineysaa in la joojiyo codsiga. Xaaladdaas, iscasilaadda waa in lagu soo gudbiyaa muddada loogu talagalay ujeeddadaas wicitaanka. Shaqaale dowladeed oo xirfad leh wuxuu u huray saacado badan oo waxbarasho ah inuu ku ansixiyo mucaaradka. Laga soo bilaabo xilligii ay ku guuleysatay ujeedadeedii ugu weyneyd, waxay heshay mudnaan kale oo ah kuwa ka muuqda miisaanka tartanka wareejinta.
Qof kastaa wuxuu dhisa mashruuc nololeed xirfad leh oo la jaan qaadaya heerka qoys ama heer shaqsi. Ahaanshaha shaqaale dawladeedna waa mid kamid ah qorshayaasha qayb ka ah mashruuca shaqada ee kuwa doonaya inay helaan boos joogto ah. Laakiin waxaa jira go’aamo badan oo qofka bini aadamka ahi inta uu nool yahay gaadho si uu farxad u gaadho. Loolanka wareejinta ayaa ka mid ah go'aamadaas oo dhiirrigelin kara dhiirrigelinta. qof raba inuu u dhowaado meel macno shucuur leh ugu jirto isaga.
Maxay yihiin su'aalaha kale ee aad doonayso inaad ka faallooto tartanka wareejinta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Waa maxay tartanka wareejinta?